Kooxda FC Sion oo sabab yaab leh u ceyrisay xiddigii hore Arsenal ee Alex Song iyo Johan Djourou – Gool FM
(Yurub) 20 Mar 2020. Labada xiddig ee kala ah Alex Song iyo Johan Djourou ayaa ka mid ah sagaal ciyaaryahan oo laga fasaxay kooxaha horyaalka Switzerland ka ddib markii la joojiyay horyaalkaas sababa la xiriira faafitaanka caabuqa Coronavirus awgiis.
Kooxda reer Swiss ee FC Sion ayaa ceyrisay ciyaartoydii hore ee Arsenal kaddib markii ay diideen inay mushaaroodkooda dhimmaan inta horyaalka uu xannibanyahay.
Horyaalka Switzerland ayaa la joojiyay 1-dii bishan March kaddib markii dowladda dalkaas ay mamnuucday goobaha ay isugu imaadaan dad ka badan 1,000.
Inta uu xannibanyahay horyaalka dalkaas, madaxweynaha kooxda FC Sion ee Christian Constantin ayaa ka dalbaday in ciyaartoyda kooxda ay dhimaan mushaaraadka, waxaana inta ugu badan ciyaartoyda kooxda ay diideen inay aqbalaan qorshaha madaxweynaha.
Keliya Song iyo Djourou ma ahan xiddigaha diiday inay dhimaan mushaaroodkooda, sidoo kale kabtanka kooxda Xavier Kouassi iyo laacibkii hore ee kooxda Fulham, Pajtim Kasami ayaa iyagana laga bixiyay albaabka kooxda booska siddeedaad kaga jirta horyaalka 10-ka koox ay ciyaaraan ee Swiss Super League.
Seydou Doumbia, Birama Ndoye, Ermir Lenjani, Mickael Facchinetti iyo Christian Zock ayaa sidoo kale laga eryay kooxda Sion.
Fernando Torres oo doortay shaxdii ugu fiicneyd xiddigihii uu ka gabar ciyaaray xirfadiisa kubadda cagta